crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> June | 2021 | HimiloNetwork
Himilo June 28, 2021	Leave a comment 183 Views
MUQDISHO (HN) — Sannad kasta 27 June waxaa loo dabaal-degaa xuska Maalinta Ganacsiyada yaryar iyo kuwa heer-dhexaadka ah si kor loogu dhigo wacyiga muhiimadda iyo kaalinta ganacsiyada meel dhexaadka ah ay ka ciayari karaa la kulmidda Qorshaha horumarinta joogtada ee QM. Waxaa jira jaadad iyo nuucyo ay ganacsiyada yaryari ka koobmaan. Waxaana qeyb ka ah wax-soo-saarka yaryar iyo qeybinta adeegyada ...
Himilo June 27, 2021	Leave a comment 120 Views
MUQDISHO (HN) — Shaqaale bangi oo ku yaal Hindiya, kana soo kabanayay cudurka coronavirus ee dhibaato ku haya dalkiisa, ayaa la sheegay in loo diiday fasax isla markaana lagu qasbay inuu u yimaado shaqada isagoo ku xirnaa haanta oksijiinta. Arvind Kumar wuxuu maareeye ka yahay laanta Bokaro ee Bangiga Qaranka ee Punjab, oo ku taal gobolka Jharkhand, wuxuu goor dhaweyd ...
Himilo June 27, 2021	Leave a comment 130 Views
MUQDISHO (HN) — Waxay ahayd bilowga xurriyad iyo madax-banaani astaan qaranimo iyo qab umadeed suntan oo geyi kamid ah dhulka Somaalida uu ka helay gumeystayaashii dul-deganaa mid kamid ah. Dad badan waxay xusuusan yihiin sida habeenkaasu uga dhignaa dib-u-dhalasho iyo damaashaad aanay jirin ereyo lagu mcineyn karay. Markiise calankii Ingiriis ee ka dul banan jiray dhulka waqooyiga Somaaliya hoos loo ...
Himilo June 27, 2021	Leave a comment 226 Views
MUQDISHO (HN) — Jabuuti waa barta istiraatijiyadda bariga Afrika oo dhaca xeebta waqooyi bari ee Geeska Afrika. Waxay dhinaca ku heysaa Marinka Baab al-Mandab kaas oo kala seera ama kala gooya Badda Cas iyo Gacabnka Cadmeed. Intii u dhaxaysay 1867-1967-kii waxaa loogu yeeri jiray Isticmaarka Faransiiska ee Dhulka Cafarta iyo Ciisaha. Markii la gaaray 1967-1977) dalkani wuxuu magaciisa Jabuuti qaatay ...
Himilo June 19, 2021	Leave a comment 120 Views
MUQDISHO (HN) — Shirkad Japan laga leeyahay ayaa bixinaysa fursad ah in kuwa doonaya dadka cayilan inay u sameeyaan adeegyada ganacsiga ay hadda kaddib ku kiraystaan saacaddiiba 8 dollar. Cayilku ma ahan wax dhaqan ka ah gudaha Japan. Waxaa badi bulshada ay doorbidaan inay noqdaan meel dhaxaad caafimaad leh. Waxaase jira cayaar caan ka ah waddanka oo ay dheelaan dadka ...
Himilo June 19, 2021	Leave a comment 128 Views
MUQDISHO (HN) — Anand Dhawaj Negi, oo ahaa xisaabiye iyo qasnadhaye katirsan waaxda adeegga bulshada Hindiya ayaa ku guuleystay inuu bacad lama degaan ah ka dhigo keyn cagaaran. Halgankiisa oo 20-jirsaday wuxuu soo muujiyay saameyn togan iyo horukac loo aayay oo laga dareemay waqooyiga bacadka dhaca ee Himachal Pradesh ee dalka Hindiya. Sannadkii 1997 markii dowladda Hindiya ay bilowday Mashruuca ...
Himilo June 19, 2021	Leave a comment 121 Views
MUQDISHO (HN) — Haweeney sannadkii 2010-ka laga waayay gurigeeda ayaa 10 sano kaddib la ogaaday inay ku nooshahay guri deriska ah oo kii qoyskeeda u jirta 500 oo mitir. Waxayna kula nooshahay inankii ay is jeclaadeen. Sajitha ehelkiisa waxay ku sigteen inay ka quustaan inantooda raadin iyo baadigoob dheer kaddib markii maalin ay isaga tagtay guriga. Waxay moodayeen inay dhimatay ...
Himilo June 19, 2021	Leave a comment 97 Views
MUQDISHO (HN) — June 17 sannadka 2021 Maalinta Caalamiga ee Nabaadguurka iyo Abaaraha waxaa diiradda lagu saarayaa dib u nooleynta dhulka qalalay si loogu nacfiyo. Ol’olahaas dib usoo celinta ahina wuxuu horseedayaa abuurka fursado dhaqaale, shaqooyin iyo dakhliga qofeed oo kordha. Waxaa sidoo kale kobcaya heerka wax soo saarka cuntada. Qorshaha daba qabashada dabaadiga ka haray dhulal badan oo nabaad ...
Himilo June 16, 2021	Leave a comment 134 Views
MUQDISHO (HN) — Sannad kasta 16 June marka la gaaro waxaa QM ay u aqoonsatay Maalinta Caalamiga ee Qoysaska iyo Xawaaladaha. Xuska maalintan ayaa lagu aqoonsadaa doorka iyo kaalinta caadyaalka ah ee xoogsatada ka xoojiya dalalka ka baxsan waddamada ay u dhasheen ay ku leeyihiin sare-u-dhigidda iyo horumarka xubnaha qoysaska ay ka dhasheen ee dalkii hooyo ku sugan. Shaqaalaha ka ...
Himilo June 7, 2021	Leave a comment 152 Views
MUQDISHO (HN) — Maanta waa Maalinta Caalamiga ah ee Bedqabka Cunnada. Sannadkii 2018-ka ayaa Kal-fadhiga Guud ee QM wuxuu 7 June u asteeyey inay tahay maalinta bedqabka cunnada. Kulanweynihii caafimaadka dunida ayaa sannadkii hore meelmariyay heshiis lagu xoojinayo laguna dhirrri-gelinayo dadaallada wax ku oolka ah ee lagu doonayo hubinta iyo tayada caafimaad ee cunnooyinka si qof walba oo aadmi ah ...